HR Manager အယောက် 100 မှာ 93 ယောက်လောက်က LinkedIn သုံးတာကို သင်သိပါသလား? - JobExpress Myanmar
LinkedIn ဆိုတာက အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေ ၊ ဝန်ထမ်းအလိုရှိနေတဲ့ Company တွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Social Media တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Professional Social Networking တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LinkedIn ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Facebook , Instagram လောက်တော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးမပြုသေးပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာတော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ Social Networking Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်သူအနေနဲ့ LinkedIn ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ Company ကြီးတွေ ၊ အလုပ်ရှင်တွေကိုလည်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်ရနိုင်ခြေလည်းပိုမိုများပြားပါတယ်။ အခုလို အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာမှာတော်တော်လေး အဆင်ပြေလွယ်ကူတဲ့ LinkedIn ကိုအသုံးပြုရင် ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့..
(၁) HR Managers , Recruiters တွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်မယ်။
HR Manager အယောက် 100 မှာ 93 ယောက်လောက်က LinkedIn သုံးတာကို သင်သိပါသလား? သင်ကသင့်ရဲ့ Profile ကို LinkedIn မှာကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှာတဲ့အခိုက်အတန့်ထက် အလုပ်ရှင်ကသင့်ကိုလာရှာပြီး အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းတဲ့အခွင့်အရေးက ပိုများပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်အခုလိုပြောရလဲဆိုတော့ HR Manager တွေအများကြီးရှိတဲ့ Platform တစ်ခုမှာ ကိုယ်တွေလို Talent ရှိတဲ့ အလုပ်ရှာသူတွေ ၊ HR Manager တွေအားလုံးနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ Network တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နေရာဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
(၂) ကိုယ့်ရဲ့ Knowledge နဲ့ Skills ကိုချပြနိုင်မယ်။
အပေါ်ကအချက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုမျိုးပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Profile ကို LinkedIn မှာကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားလို့တဲ့အပြင် တစ်ခြား Social Platform နဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စီနီယာတွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ Recommendation တွေထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်က Computer နဲ့ပတ်သက်ပြီး Microsoft အပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဖော်ပြထားရင် ကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေကလည်း ကိုယ်တစ်ကယ်တော်ကြောင်း Comment ရေးပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလို Features တွေကြောင့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ HR Manager တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Knowledge နဲ့ Skills ကိုချပြနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကိုယ့်ရဲ့ Personal Branding ကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်မယ်။
Company တွေက သူတို့ရဲ့ Branding ​ကိုတည်ဆောက်သလိုမျိုး သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လိုလူဆိုတာ လူတွေမြင်လာအောင် Personal Branding တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ LinkedIn ကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်။ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် သင့်ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်တယ် ဆိုတာ သင့်ရဲ့ Personal Branding တည်ဆောက်မှုအပေါ်မှာအများကြီးသက်ရောက်ပါတယ်။ HR Manager တွေက သင့်ရဲ့ Profile ကိုကြည့်ပြီး သင်ဘယ်လိုလူလဲ၊ သင်သူတို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) LinkedIn က Professional ကျတဲ့ Groups တွေ Join လို့ရမယ်။
Facebook မှာလိုမျိုးပဲ LinkedIn မှာလည်း Group တွေထဲဝင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မတူတဲ့အချက်ကတော့ LinkedIn အသုံးပြုတဲ့ Users တော်တော်များက Professional ကျတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် Group တွေထဲမှာတင်လေ့ရှိတဲ့ အလုပ်ခေါ်စာတွေ ၊ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ တော်တော်များများကိုလည်း တစ်ခြား Social Media တွေထက် ပိုပြီးယုံကြည်လို့ရပါတယ်။ Group တွေထဲမှာဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေချပြလို့ရမယ် ၊ တစ်ကယ် Talent ရှိတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ LinkedIn မှာဆိုရင် English လိုပဲအပြောများတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ English Skills ကိုလည်းတစ်ခါတည်းမြှင့်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
(၅) Talent Solutions မှာလေ့လာလို့ရမယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အသုံးပြုနေပြီး တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ Feature တစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဒီ Feature လေးက ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ရော ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အဖြေတွေရှာလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်နည်း ၊ Interview ဖြေပုံဖြေနည်း ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Soft Skills တွေတိုးတက်နည်း အစရှိတာတွေမျိုးစုံပါဝင်တဲ့အတွက် အချိန်ပေးရင်ပေးသလောက် ကိုယ့်ရဲ့ Soft Skills တွေ Hard Skills တွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ သင့် Business နဲ့ပတ်သတ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေမှု အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် linkedIn က အများကြီး အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် LinkedIn ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး Connections အသစ်တွေ ၊ Network တွေချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။